लेटाङ प्रिन्सेस भएपछि जीवनमा परिवर्तन महशुस भयो - Merodesh.news
लेटाङ प्रिन्सेस भएपछि जीवनमा परिवर्तन महशुस भयो
विराटनगर, ५ साउन। सुजता खतिवडा लेटाङ प्रिन्सेसकी विजेता हुन् । मोरङको लेटाङ–९ की १८ वर्षीया यी सुन्दरी कक्षा १२ को पढाई सकेर उच्च शिक्षाको तयारीमा छिन् । बुवा जीवनाथ खतिवडा र आमा लक्ष्मीदेवी खतिवडाको कोखबाट जन्मिएकी सुजता गाउन र नाच्न रुचाउँछिन् भने नयाँ नयाँ ठाउँको अवलोकन गर्नु उनको सौख हो ।
लेटाङ प्रिन्सेसको ताज जित्दा कस्तो महशुस गर्नु भयो ?
धेरै खुशी भएँ । हामी ४३ जना प्रतिष्पर्धीहरु लेटाङ प्रिन्सेसको ताज जित्न कडा मेहेनत गरेका थियौं । जसमा म त्यो ताज जित्न सफल बने । यो उपाधि जित्नु मेरो लागि ठूलै उपलब्धि हो भन्ने मैले ठानेकी छु ।
लेटाङ प्रिन्सेस भएपछि जीवनमा के परिवर्तन आयो त ?
हिजो म सामान्य युवती थिएँ, आज यो प्रतियोगिताले धेरै माझ चिनाएकोे छ । तर, म आफैं हिजो जस्ती थिएँ उस्तै छु भन्ने महशुस गर्छु । उपाधि जितेर होइन, काम गरेर ठूलो बन्न सकिन्छ । यति हो, उपाधिले पहिचान बनाउन सघाउँछ ।
म अहिले अध्ययन गर्दैछु । भबिष्यमा मोडलिङ क्षेत्रमा स्थापित हुने सोचाई बनाएको छु ।
साथीहरुसँग घुमफिर गर्ने, टिभी हेर्ने, फेशबुकमा साथीहरुसँग कुराकानी गर्ने ।
सबै मान्छेको हेराई एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन । तसर्थ म धेरै राम्री छु भन्ने पनि लाग्दैन । म जस्तो छु, त्यसैमा खुशी छु ।